Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Costa Rica » Costa Rica gbatịrị ndepụta nke mba ndị a kwere ka ha leta
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ gbasara Costa Rica • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Na August 1, 2020 Costa Rica mepere ọdụ ụgbọ elu mba ya: Ọdụ ụgbọ elu mba ụwa Juan Santamaría, Ọdụ ụgbọ elu Daniel Oduber Quirós, na ọdụ ụgbọ elu Tobías Bolaños.
A na-enyocha ndepụta nke mba ndị a na-enye ohere ịbanye n'oge na-adabere na mmelite kachasị ọhụrụ na ndepụta ahụ dị ka ndị a:
Malite na Septemba 1st, ndị bi na steeti isii nke United States of America ga-enwe ike ịga leta Costa Rica:
• Njikọ Connecticut
Ugbu a Costa Rica International Airport na-emeghe ugbu a maka ndị njem nleta si:
Iberia na Lufthansa ugbua ife efe.
Air Canada malitegharịa ụgbọ elu nke September 12.
Air France malitegharịa ụgbọ elu October 14th.
• Ndị na-eme njem nleta ga-emezue ma gosipụta nyocha ihe omumu.
• Ndị njem nleta ga-eweta ihe akaebe nke ule PCR coronavirus na-adịghị mma. Nsonaazụ a ga-enwetara n'ime elekere 48 tupu njem ha na Costa Rica.
• Ndị njem nleta ga-enwerịrị mkpuchi njem nke na-ekpuchi nlekọta ahụike ma ọ bụ oge ezumike nke ụlọ nkwari akụ na-atụghị anya ya. Ndị njem kwesịrị iso ọdụ ụgbọ elu na usoro nlekọta ahụike mpaghara niile. Nke a gụnyere ikpuchi ihu na mkpuchi ihu n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnọdụ niile n'ime ụlọ
• Ndị njem si Amerịka ga-egosi ihe gosiri na ha bi n’otu n’ime steeti isii enyere ikike site na akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala.